Tan-dalàna… kolontsaina - ewa.mg
News - Tan-dalàna… kolontsaina
Ny lalàna dia lalàna; mafy ny
lalàna, nefa izay no lalàna. Inona koa? Misy ny fitenin’ny sasany
hafahafa hoe: natao hodikaina ny lalàna, ho an’ny hafa ny lalàna.
Amin’izao fitondrana izao, anisan’ny fanamby ny hoe fanjakana
tan-dalàna. Ao anatin’izany ny vahoaka. Ny vahoaka no fanjakana? Na
ny mpitondra no manjaka, ny vahoaka: ny vahoaka no mahatonga ny
mpitondra manjaka. Mby aiza?
Matoa atao fanamby ny hoe fanjakana
tan-dalàna, tsy tan-dalàna izany hatramin’izay na hatramin’izao.
Tsy hita loatra izay hoe tan-dalàna izay tamin’ny fitondrana
nifandimby? Tsy mahagaga raha tsy tan-dalàna ho azy koa ny vahoaka.
Tsy misy firy ny ohatra tahafina, fa avy any ambony ny ohatra. Izay
mahitsy no afa-kanitsy, izay manara-dalàna no afa-kampanara-dalàna,
izay marina no afa-kanamarina…
Tsy mbola mety ho kolontsaina ny
fanarahan-dalàna? Fomba fiaina izany, mandeha ho azy… Saika mbola
tahotra mpitandro filaminana ny fanarahan-dalàna ho an’ny sasany,
tahotra fitsarana sy fonja na lamandy. Raha tsy tahotra an’izany
rehetra izany ny fanarahan-dalàna, henatra sao afa-baraka raha hita
sy fantatry ny hafa. Hany ka tsy mety ho fahamendrehana amin’ny
maha olona ny fanarahan-dalàna.
Vokany, mifanohitra amin’izany:
fahamboniana ho an’ny sasany ny tsy fanarahan-dalàna, fiavahana
mitaha amin’ny hafa. Mety ho lasa fireharehana sy fisetrasetrana
aza izany: tsy miraharaha na inona na inona afa-tsy ny lalàna
ihany, tsy matahotra na iza na iza. Santionan’ny mahalalim-paka ny
fahazarana sy tarazo ratsy amin’ny tsy fanarahan-dalàna izany
rehetra izany, mahahenika ny maro, efa ho lava…
Ahoana àry no hahatongavana amin’ny
fanarahan-dalàna ho zary kolontsaina? Fomba fiaina hanajan-tena sy
hanajana ny hafa amin’ny maha olona: tsy atao tsy fidiny, tsy
mampiferotra aina. Mila fanazavana sy fandresen-dahatra
mandrakariva ny maha zava-dehibe ny lalàna? Takina koa ny ohatra
velona hotahafina amin’ny fampiharan-dalàna, ny fanasaziana… Mby
aiza amin’ity hoe fanjakana tan-dalàna?
L’article Tan-dalàna… kolontsaina a été récupéré chez Newsmada.
Soamahamanina – RN1: tratran’ny zandary ny Sprinter iray nitondra mpandeha an-tsokosoko
Manoloana ny fandikan-dalàna ataon’ny mpamily sasany amin’izao fotoana, fiara iray mpitatitra entana indray no saron’ny zandary nitondra mpandeha miisa dimy an-tsokosoko tao amin’ny kaominina Soamahamanina, distrikan’i Miarinarivo (RN1) afakomaly… Mafy loha ara-bakiteny! Saron’ny zandary teo amin’ny sakana ao Tranovy Ambatomainty, kaominina Soamahamanina, distrikan’i Miarinarivo (RN1), afakomaly, ny fiara Sprinter fitanterana entana nitondra mpandeha an-tsokosoko miisa dimy. Raha ny tatitra nampitain’ny zandary, avy aty an-drenivohitra nikasa hihazo an’Analavory sy Ankadinondry ireto olona ireto kanjo tratra teo amin’ny sakana nataon’ny zandary. Voalaza fa nitondra entana ilay fiara ary nisitrika tao anelanelan’ny entana ireto olona ireto. Raha jerena tampoka dia toy ny hoe entana tokoa ny entin’ilay fiara, kanefa misy olona ao anelanelany. Nogiazana avy hatrany ilay fiara ka naiditra am-balam-pamonjana mandritra ny 10 andro raha nanokafana fanadihadiana kosa ny mpamily sy ireo mpandeha tratra niaraka tamin’ilay fiara. Nampiahiahy ny zandary teo amin’ny sakana ny fahitana izany ka niroso tamin’ny fisavana avy hatrany izy ireo, hita tao anaty entana tokoa ireto olona dimy ireto. Nilaza ireto mpandeha ireto fa nandoa saran-dalana avokoa. “Anterina hatrany fa mahavoasazy ny manao fitaterana olona an-tsokosoko amin’ny fiara fitaterana entana”, hoy ny fanazavan’ny zandary. Maro koa ireo moto sy bisikileta voaporofon’ny zandary fa manao fitaterana olona amin’iny lalam-pirenena voalohany iny. Nandraisana fepetra ka nogiazana ireto moto sy bisikileta ireto. Fa maninona no any Soamahamanina vao tratra nefa nisy sakana maromaro mialoha ny hahatongavana ao amin’ity kaominina ity?Jean ClaudeL’article Soamahamanina – RN1: tratran’ny zandary ny Sprinter iray nitondra mpandeha an-tsokosoko a été récupéré chez Newsmada.
Fiangonana FPVM: 50 taona nitandremana ny pasitera Randrianantoandro
50 taona nitandremana ny pasitera Randrianantoandro Jean Joseph, mitarika ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara (FPVM). Nanamarika izany jobily izany ny fiangonana sy ny mpino rehetra ao aminy, mandritra ny hateloana. Nosantarina tamin’ny fanompoam-pivavahana, ny zoma teo teny amin’ny foiben’ny fiangonana Antaninanandrano Ampandrana, ny hetsika ary nitohy hatramin’ny omaly. « Mangidy ny asa fanompoana satria mahery vaika ny fanenjehana sy ny fanendrikendrehana samihafa rehefa manaraka ny Tompo tao anatin’izany 50 taona izay », araka ny nambarany. Niharan’ny fanenjehana toy izany koa ny fiangonana FVPM nefa vao mainka lasa zezika nampiroborobo azy izany ka niitatra amin’ny toerana sy firenena maro maneran-tany ny masoivohon’ny fiangonana ary tsy natahotra ny mpino. Ahitana fiangonana any Paris, any Kanada, any Belzika, any Alemaina, any La Réunion, any Maorisy… Tamin’ny fanisana farany, dimy taona lasa, 1 tapitrisa ny mpino ao amin’ny FPVM. “Nanamarika ny jobily ny fampirantiana ny tantaran’ny 50 taona nitandremany sy ny fandraisana ny pasitera rehetra nivoaka avy ao amin’ny fiangonana tamin’ny takarivam-pitahiana, ny asabotsy teo », hoy ny fanazavan’ny filohan’ny komity mpanomana ny jobily, Rakotondrabenja Fara.Amin’izao ankatoky ny fetin’ny Krismasy izao, nanambara ny pasitera Randrianantoandro fa fahatsiarovana ny nahaterahan’ny Tompo ny Krismasy ary tokony harahina avokoa ny fampianarana nolazainy.Vonjy A.L’article Fiangonana FPVM: 50 taona nitandremana ny pasitera Randrianantoandro a été récupéré chez Newsmada.
Toy ny varotra rehetra: maro ny mivelona amin’ny fanangonana fako
Trangan-javatra iray hatramin’ny ela ny fahamaroan’ny mpanangona fako. Betsaka ny mivelona amin’izany. Misy akony lehibe eo amin’ny toekarena izany, saingy maro koa ny tsy mahalala noho ny antony maro.Mivelona amin’ny fanangonana fako ny tokantrano miisa 200 mahery eto Antananarivo. Manangona karazana tavoahangy, kapoaka, tapa-by, kitapo rovitra, sns. “Raha tsara ny tsena, mety mahita hatramin’ny 40 000 Ar ny andro iray. Amin’ny ankapobeny, manodidina 15 000 Ar ny vidin’ny fako voaangona iray andro”, hoy ny raim-pianakaviana iray, fito taona izao izany ny namelomany ny vady aman-janany. Mipetraka ao La Réunion Kely ny ankamaroan’ireo olona mivelona amina fanangonana fako ireo.Toy ny raharaham-barotra rehetra, misy ny mpanangona sy ny mpiantoka, ao koa ireo manangona sady miantoka mivarotra amin’ny mpandray azy ireny. Azo ahodina ireny fako ireny. Efa nentanina ny rehetra ho fikajiana ny tontolo iainana. Misy rahateo ny andro iraisam-pirenena momba ny fanodinana fako, ny 18 marsa.Koa eto amintsika, anarivony taoniny ny fako azo ahodina, saingy tsy misy ny fepetra hanaovana izany hatramin’izao. Mbola mifangaro ny fako, tsy misy ny fanavahana azy, lasa miteraka loto indray ka ny mahantra maro anisa no hita sy zatra mahay manangona sy mampiavaka azy ireny. Misy Sinoa eto an-toerana mividy ireny fako azo ahodina ireny, toy ny poti-by, y plastika, sns, ary aondrany any aminy havadika fitaovana vaovao indray, izay haverina amidy aty amintsika ny ampahany maro.Aiza ny fiahiana sosialy? Ao ny Bureau international du recyclage (Bir), manentana ny rehetra ho amin’izany miaraka amin’ireo orinasa mpanodina fako any Eoropa. Lohahevitra nosafidin’ny Bir tamin’ity taona ity, indrindra ho an’ny tanora, ny “Manodina ho an’ny hoavy”. Aseho ny sary momba izany mialoha sy aorian’ny fanodinana. Koa azo ambara fa mitondra anjara asa goavana eo amin’ny tontolo iainana sy ny toekarena ireny mpanangona fako ireny. Aiza ny fiahiana sosialy ho azy ireny eto amintsika? R.MathieuL’article Toy ny varotra rehetra: maro ny mivelona amin’ny fanangonana fako a été récupéré chez Newsmada.
Ny maha firenena: zavatra dimy tsy maintsy ananana
Ho an’ireo novolavolain’ny fianarana anaty rindrina efatra, manana ny hamaritany azy ny maha firenena ny firenena iray. Ohatra ny fisian’ny sainam-pirenena, ny hiram-pirenena, ny mponina ao aminy, ny velaran-tany, sns. Ho an’ny tinaizan’ny fahalalana voajanahary sy ny traikefa iainana, zavatra dimy no mandrafitra ny firenena sy maha izy azy manoloana ny hafa: ny teny, ny tany, ny fomba, ny tantara ary ny finoana. Avy amin’ireo no hanaingana ny fampandrosoana rehetra. Hampiharana ny firaisankina sy ny fitiavan-tanindrazana, sns.Ny olana anefa, fantatra ny fisian’ireo fototra dimy ireo, saingy tsy iainan’ny olona ao aminy. Manjary « vahoaka » (olona marobe) tsy manam-pototra ny miaina anaty firenena iray. Vokany, firenena mitsingevana ilay firenena ka azon’ireo « bodo sy adala » lalaovina sy atao amin’izay itiavany azy.… Paika tokana ihany no ampiasain’ny mpanjanaka rehefa hibodo firenena iray izy. Potehiny ireo zavatra dimy maha izy ny firenena iray ireo. Tsy tafarina ao anatin’ny anjato na amin’arivo taona mihitsy ilay firenena…… Tazano ny manodidina… Dia tahaka izao ny tarazo avelany !HaRy RazafindrakotoL’article Ny maha firenena: zavatra dimy tsy maintsy ananana a été récupéré chez Newsmada.